एक अर्बको म्युचुअल फण्ड आउदै, तयार हुुनुहुन्छ लगानी गर्न ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
एक अर्बको म्युचुअल फण्ड आउदै, तयार हुुनुहुन्छ लगानी गर्न ?
काठमाडौ । सर्वसाधारणको लागि ८ करोड ५० लाख ईकाइमा लगानी खुल्ला गर्दै १ अर्ब रुपैयाको समुहिक लगानी कोष जारी हुने भएको छ । एनआईसी एसिया क्यापिटलले एक अर्ब रुपैयाँको एनआईसी एसिया क्यापिटल ग्रोथ फंड (सामुहिक लगानी कोष) को ईकाई विक्रीमा ल्याउने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्यापिटललाई कोष जारी गर्ने अनुमति दिएको छ । एनआईसी एसिया क्यापिटल एनआईसी एसिया बैंकको सहायक कम्पनी हो ।
पछिल्लो समयमा धितोपत्र बजारमा फरक लगानीको स्रोतका रुपमा विकास हुँदै गरेको म्युचुअल फण्डमा लगानीकर्ताको समेत आकर्षण बढ्दै गएको छ । साधारण शेयर प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिन्छ भने यस्ता फण्डको मूल्य प्रति इकाई दश रुपैयाँ रहने गर्छ । शेयर बजारलाई थप विविधिकरण गर्ने र लगानीका स्रोत जुटाउने लक्ष्यका साथ यस्ता फण्ड तयार गरिन्छ ।
क्यापिटलले सात बर्षे बन्दमुखी सामुहिक लगानीकोष ल्याउने भएको हो । क्यापिटलले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको दश करोड ईकाइको बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात एक करोड पचास लाख इकाई कोष प्रबद्धक एनआइसी एशिया बैंकलाई सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी आठ करोड ५० लाख इकाई सर्वासाधारणलाई बिक्री गरिने क्यापिटलले जनाएको छ ।
लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिने र बजारलाई थप फराकिलो बनाउन म्याचुल फण्डको कारोबार गर्न लागिएको सम्बन्धित कम्पनीको भनाइ छ ।
एनआईसी क्यापिटलले शेयर निष्काशन तथा विक्रीप्रबन्धक संगै, लगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट), निक्षेप सदस्य (डीपी) सेवा, लगानी परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
२०७४ पुष १२ गते प्रकाशित